Isolation transformer: konke odinga ukukwazi | Ihadiwe yamahhala
Phakathi kwezingxenye ze-elekthronikhi ezihlaziywe kwakukhona ne i-toroidal transformer, ngaphezu kwalokho siphinde sabhekana nalolu hlobo lwezakhi lapho siphawula ngezinto ezinikezwa amandla, i izinhlobo zamanje, njll. Manje sekuyithuba lolunye uhlobo olungavamile lwe-transformer, njenge i-isolation transformer.
Ungakwenza yazi ukuthi kuyini, ukuthi kuyini, umehluko nezinye izinhlobo zama-transformer, kanye nendlela yokukhetha enye yazo kumaphrojekthi akho esikhathi esizayo.
1 Iyini i-isolation transformer?
1.2 Izinzuzo ze-transformer yokuhlukanisa
1.3 Izinhlelo zokusebenza ze-transformer yokuphepha
2 Ungathenga kuphi i-isolation transformer
Iyini i-isolation transformer?
I-Los ama-transformer kagesi Banendawo yokudlulisa amandla phakathi kwamawindi kakhondatha amabili noma ngaphezulu ngaphandle kokuthi kube khona ukuxhumana okungokoqobo phakathi kwabo. Okuhlukile kungaba ama-auto-transformers. Ukuze kukhiqizwe lokhu kudluliswa kususelwa ekungenweni kwe-electromagnetic, futhi ngokuvamile ukuphenduka okungaphezulu noma okuncane kusetshenziswa kumawindi azo ukuguqula i-voltage.
Ngenxa yalokho ukuhlukaniswa phakathi kwamasekhethiNjengoba eyodwa ixhunywe ekujikeni okuyinhloko kanti enye ixhunywe ekujikeni kwesibili, isignali ingashintshwa kuphela, futhi ingasebenza njengesici sokuphepha.
Eqinisweni, uma sibhekisela ku-transformer yokuphepha noma i-isolation transformer, sikhuluma nama-transformer akhethekile kakhulu 1: 1 isilinganiso, okungukuthi, ngokujika okufanayo kumakhoyili ayo amabili (inombolo efanayo yokujika), ngakho ayiguquli i-voltage. Okukhiphayo kuzolingana nokokufaka kwakho.
Ngenxa yalokhu, zisetshenziswa endaweni izinhlelo zokusebenza zokuphepha, uma udinga ukudlulisa amandla kagesi usuka kwenye isekethe uye kwenye futhi ufuna ukuhlukanisa kokubili.
Ngaphakathi kwama-transformer okuphepha, noma ukuhlukaniswa, ungathola izinhlobo ezimbili eziyisisekelo:
Isigaba esisodwa: inesikrini esifakwe phakathi kokujikajika okuyisisekelo nesesibili, esixhunywe kutheminali evalekile. Ngaphezu kwalokho, amabakaki akhuphukayo afakwe ku-transformer core. Lezi futhi zinezinzwa zokushisa ezakhelwe ngaphakathi, futhi zinezinga eliphansi lomsindo. Isebenzisa isigaba nokungathathi hlangothi, kanye nama-voltage okokufaka angu-220V noma angu-230V ngokuvamile.
I-Triphasic: iphinde ibe nesakhiwo esilingana nesigaba esisodwa, kodwa kulokhu ukufakwa kwezigaba ezintathu. Okusho ukuthi, isigaba esisodwa sijwayelekile ezinhlelweni zasekhaya, kanti ukufakwa kwezigaba ezintathu ngokuvamile kutholakala embonini noma ekufakweni kwezentengiso. Lokhu kufakwa akunaso isigaba esisodwa kuphela kanye nekhebula elilodwa elimaphakathi, kodwa kuhlukaniswe ngamagagasi amathathu ashintshanayo noma izigaba ukuze kuhlukaniswe amandla okufaka. Kulokhu, ngokuvamile basekela 380 noma 480V.
Izinzuzo ze-transformer yokuhlukanisa
Ukuba ne-isolation transformer ingaba nochungechunge lwe izinzuzo ukufakwa kukagesi, okufana nalokhu:
Zibalulekile ukuvikela imisinga kagesi, isibonelo, ukuvikela ukushaqeka kukagesi.
Baqinisekisa ukutholakala kukagesi ovikela ukufakwa. Zilungele ukufakwa kokutholakala okuphezulu.
Ukulahlekelwa kwayo kuphansi kunezinye izinhlobo zama-transformer.
Aklanywe futhi akhiqizwa ngezingqimba ezimbalwa zokufakwa okuqinisiwe, okunikeza ukuqina nokuphepha okukhulu.
Izinhlelo zokusebenza ze-transformer yokuphepha
Uma uzibuza mayelana nezicelo zalolu hlobo lwe ukuzihlukanisa noma i-transformer yokuphepha, zikhona ngobuningi bokufakwa kukagesi namadivayisi. Ngokwesibonelo:
Ukuvikela abasebenzi ekushayweni kukagesi. Kokubili ezikhungweni zezimboni nasezikhungweni zomphakathi ezisebenzisa izigaba ezintathu nesigaba esisodwa.
Kweminye imithombo yamandla yezinto ezibucayi.
Imishini yegumbi lokusebenza ethambile.
Imishini yaselabhorethri kanye nemishini ethile yokuphakela ugesi yama-workshop kagesi.
Njengesihlungi somsindo sikagesi, sihlukanisa okokufaka kokuphumayo.
Iqiniso liwukuthi izinketho zihlukahlukene kakhulu.
Ungathenga kuphi i-isolation transformer
Uma ufuna a isolation transformer ngentengo enhle, unezinketho ezahlukene, phakathi kwazo, enye ethandwa kakhulu ukuyicinga endaweni yokuthengisa ye-Amazon. Isibonelo, nazi izincomo:
Akozon ama-transformer akhethekile wezinhlelo zokusebenza zomsindo. Kukhona izingcezu eziyi-10, futhi ziyi-1: 1.
I-ZCX isolation transformer 1: 1, okokufaka okungu-220v nokukhipha okungu-220v. Isekela kufika ku-10W.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » Isolation transformer: konke odinga ukukwazi
I-Raspberry Pi Zero 2W: entsha kakhulu evela ku-Raspberry Pi